Xiisad dagaal oo ka dhex taagan Ciidamada dowladda & kuwa Kenyan ah - Awdinle Online
Xiisad dagaal oo ka dhex taagan Ciidamada dowladda & kuwa Kenyan ah
Xiisad ayaa ka taagan xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee u dhow magaalada Mandheera kaddib markii halkaas la keenay ciidamada dowladda Soomaaliya, sida uu shaaciyay Wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka, oo uu soo xigtay Wargeyska Daily Nation – oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer Kenya – ayaa sheegay inay arkeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo isku diyaarinaya goobo muhiim ah oo ku yaalla xadka u dhaxeeya labada waddan.
“Waxaan ku waabariisannay ciidamo milatari ah oo xadka jooga. Arrintan aad bay noo walwal galisay,” ayuu yiri Mid ka mid ah dadka deegaanka oo uu wargeyska soo xigtay.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada amaanka Kenya ee ku sugan Mandheera oo magaciisa qariyay ayaa xaqiijiyay in ciidamada Soomaaliya ay xuduudka imaadeen, sida uu shaaciyay Daily Nation.
“Waxaan helnay xogta ku saabsan waxa ka socda xadka laakiin arrintaas waxaa go’aankeeda gaaraya saraakiisha sar sare ee ku sugan magaalada Nairobi,” ayuu yiri.
Previous articleXOG: Midowga Musharixiinta & Madaxweynayaasha Puntland & jubbaland oo kulan gaar ah yeelanaya
Next articleDowladda Soomaaliya oo sheegtay inay ka hortageyso banaanbaxyada